Uzirekhoda njani iindwendwe zaseKhaya kwiZoom yakho H6 kunye nondwendwe olukude eGarageband | Martech Zone
NgoMgqibelo, Oktobha 6, 2018 NgoLwesine, Meyi 7, 2020 Douglas Karr
Ukuba uza kwenza nzulu malunga nepodcasting, ndingakukhuthaza ngenene ukuba wongele i Zoom H6 Irekhoda. Sisixhobo nje esilula esifuna ukuba phantse kungabikho qeqesho lokurekhoda. Yongeza ezinye Shure ii-microphone ze-SM58, iyabanjwa imakrofoni ime, kwaye unesitudiyo onokuthi usithathe naphina kwaye ufumane isandi esikhulu ngaso.
Nangona kunjalo, ngelixa oku kulungele ipodcast apho zonke iindwendwe zakho zikunye nawe, ukuba undwendwe olukude ngewebhu kwenza izinto zibe nzima. Ingxaki yi-latency yomsindo kwiwebhu. Ukuba ufakele nje ilaptop yakho undwendwe lwangaphandle, undwendwe luya kufumana isandi esibi selizwi laso. Ngokwesiqhelo, umsebenzi ojikeleze oku kukuthenga umxube kwaye emva koko unokwenza iibhasi ezininzi… enye nazo zonke iindwendwe zakho zalapha ekhaya, enye ibe yiyo yonke into. Unokufaka umbhobho webhasi yakho wasekhaya ukhuphe ilaptop yakho, emva koko usebenzise enye ibhasi ukurekhoda yonke into.
Kodwa uza kuthini ukuba awunamxube okanye awufuni kuwuthwala? Bendisenza ipodcasting ekude kakhulu kangangokuba ndigqibe kwelokuba ndiyicime my Isitudiyo sepopcast saseIndianapolis. Nangona kunjalo, ndisarekhoda uninzi lweendwendwe ezikude, ke kuye kwafuneka ndikufumanise oku.
Ndithenge yonke into endiyifunayo ukuthatha istudiyo sam endleleni ukuze ndikwazi ukurekhoda kuwo nawuphi na umsitho okanye kwikomkhulu lendibaniselwano. Ngaphandle kwelaptop yam, khange ndisebenzise itoni yemali, nokuba. Ndiyakholelwa ukuba zonke iintambo, ii-splitters, ii-headphones, Zoom H6, kunye nebhegi yam ibiza malunga ne- $ 1,000. Eli liqhezu lethamsanqa elincinci endikhe ndalichitha estudiyo sam… kwaye ndinobunzima bokuva nawuphi na umahluko womgangatho!
Ukurekhoda kwiGarageband Kunye nokusondeza H6
Ubuqhetseba kolu seto kukuba siza kurekhoda nganye yeendwendwe zethu zalapha kwi-Zoom H6, kodwa siza kurekhoda undwendwe olukude ngokwendlela yabo eGarageband. Kungenxa yokuba sidinga isandi esihlanganisiweyo sazo zonke iindwendwe zethu ukuba zingene kumbhobho kwi-Skype (okanye enye inkqubo) ngaphandle kokondla ilizwi lazo kwakhona nge-echo. Ngelixa oku kubonakala kunzima kakhulu, nalu ushwankathelo lwamanyathelo:
Gcina ii-headphone zakho, ii-mics, ukusondeza kunye neelaptop ngokuchanekileyo.
Qwalasela i-Soundflower ukwenza isixhobo esivakalayo sokurekhoda ukufowuna kwiGarageband.
Cwangcisa iprojekthi yeGarageband ngeSkype kunye ne-Zoom yakho njengemikhondo nganye.
Ukuseta useto lwesandi seSkype ukusebenzisa isandi njengesithethi sakho.
Qala ukurekhoda kwiGarageband, qala ukurekhoda kwi-Zoom yakho, kwaye wenze umnxeba.
Emva kokuba ugqibile, yizisa iiToom tracks kwiprojekthi yeGarageband kwaye uhlele ipodcast yakho.
Inyathelo 1: Ukudibanisa iZoom yakho kunye neLaptop
Khumbula, sisebenzisa imveliso yokusondeza njengebhasi yokufaka kwifowuni yethu ye-Skype, ke uya kusebenzisa i-Zoom kwimo yesiqhelo… ungagqithisi kwi-USB ukuya eGarageband.
Qhagamshela i-headphone / mic splitter kwi-Mac yakho.
Qhagamshela I-5-ndlela yokwahlulahlula iselfowuni kwelinye icala lokwahlula. Ndacinga ukuba ndingadinga i-headphone amp encinci, kodwa oku kusebenze kakuhle!
Xhuma elinye icala lokwahlula kwi iphonephone kwi-Zoom H6 usebenzisa intambo eyindoda / eyindoda eza nokwahlulahlula kwentloko.
Qhagamshela intambo nganye yemakrofoni yakho yeXLR kwigalelo lakho lokuSondeza.
Qhagamshela nganye yakho iiheadphone kwindlela yakho yokuqhekeka kwendlela ezi-5. Ndisebenzisa ii-headphone ezingabizi kangako kwiindwendwe kwaye emva koko ndizixhokonxe ii-headphones zam ukuze ndiqinisekise ukuba iaudio ilungile.
Inyathelo 2: Faka isandi seflower kwaye usete isixhobo esifanelekileyo
Khuphela uze ufake Isandisi-lizwi, ekuvumela ukuba wenze isixhobo esivakalayo sesandi kwiMac yakho.
Sebenzisa i-Audio Midi Setup ukwenza isixhobo esidityanisiweyo esinokuba neendlela zaso kwiGarageband. Ndibize eyam ipodcasting kwaye ndisebenzise imakrofoni eyakhelweyo (kulapho kungena khona ii-headphones zeZoom) kunye ne-Soundflower (2ch).
Inyathelo 3: Cwangcisa iProjekthi yeGarageband
Vula ibhendi yeGarage kwaye uqalise iprojekthi entsha.
Zulazula kukhetho lweGarageband kwaye ukhethe IPodcasting njengeyakho Isixhobo sokufaka kwaye ushiye Iziphumo ezakhelweyo njengesixhobo sakho sokuPhuma.
Ngoku yongeza ingoma kunye negalelo 1 & 2 (iPodcasting) kunye igalelo 3 & 4 (Podcasting). Ingoma enye iya kuba lilizwi elingenayo lika-Skype kwaye enye iya kuba sisiphumo sakho sokuSondeza (ongasisebenzisiyo kuba sirekhoda iingoma ezizodwa kwi-Zoom H6 yakho). Kufuneka ijongeke ngoluhlobo:
Inyathelo 4: Setha i-Skype
Kwi-Skype, kuya kufuneka usete isithethi kwisixhobo sakho esibonakalayo, Isandi seflower (2ch) nakwimakrofoni yakho Imakrofoni yangaphakathi (eyi Zoom H6 Iziphumo zeemakrofoni zakho).
Beka ii-headphone zakho, yenza u Umnxeba wovavanyo lwe-Skype, Kwaye uqiniseke ukuba amanqanaba akho omsindo alungile!
Inyathelo 5: Rekhoda kwiGarage yezibini kunye nokusondeza
Vavanya amanqanaba emakrofoni yakho kwi-Zoom yakho kunye irekhodi lokushicilela ukuqalisa ukurekhoda iindwendwe zakho zasekuhlaleni.
Vavanya amanqanaba akho e-audio kwi-Garageband kunye irekhodi lokushicilela ukuze uqalise ukurekhoda umnxeba wakho we-Skype.
Yenza umnxeba wakho we-Skype!
Inyathelo 6: Hlela iPodcast yakho
Ngoku sowugqibile, ngenisa nje iingoma zakho zomsindo kwi-Zoom yakho, thulisa umkhondo womdibaniso wakho, kwaye uhlele ipodcast yakho.
Inqaku lokugqibela, ndifumene ibhegi emangalisayo elingana nazo zonke iintambo zam, i-Zoom yam, ii-microphones zam, imi, kunye ne-tripod kunye nethebhulethi ukuba ndifuna ukusasaza ngqo. Ndiyibiza ngokuba yeyam podcast Yiya kwiNgxowa… Ngokusisiseko istudiyo esipheleleyo se-podcast kwisingxobo esinye, esinophahla, esingena manzi endinokuzisa naphi na.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco endinawo kulo lonke eli nqaku.
tags: Amazonbelkinyiya engxoweniulwahlulo lwentlokoiiheadphoneUkuqhekeka kwemicimic micibhegi yepodcastistudiyo sepodcastibhegi yepodcastingistudiyo esiphathwayo sepodcaststudio ephathekayoSkypesonyyenza nkuluusondeza h6